Kushanda Maawa Akawanda Kumba? Nzira Yakareruka Yekumira ... | Martech Zone
Kushanda Maawa Akawandisa Kumba? Nzira Yakareruka Yekumira…
Muvhuro, July 16, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Manheru ano ndasiya simba rangu rekushandisa palaptop yangu kubasa. Ini ndaive nemagetsi maviri (chimwe chinhu chakanaka chekuita… gara uchitenga imwezve!) Asi mumwe wavo nguva pfupi yadarika akaenda pafritz.
Pandinonyora iyi posvo, ndasara nemaawa maviri nemaminitsi gumi nemashanu kuti ndiite rimwe basa kuti riitwe. Chokwadi, ini ndine mamwe makomputa mumba - asi hapana chinoshanda chaizvo senge yako laptop yakagadziriswa nenzira yawakajaira nayo. Nhasi manheru ndiri kumhanyira ku:
Wongorora imwe kodhi yakatumirwa nefemu kwandiri kuti nditore nhungamiro yangu kuti ndeye kodhi yepaghetti uye haina kukosheswa.
Pedzisa kutonga kukwikwidza kwePHP yaive inofanirwa nezuro.
Wongorora mamwe marongero emapeji akapedzwa naStephen purojekiti yatiri kushanda pariri.
Ramba uchisimudzira imwe yangu WordPress plugins.
Ramba uchiita zvimwe Blog-Kubvarura.
Uye ipapo unayo ... izvozvi ndine maawa maviri flat akarara mushure mekunyora iyi posvo! Saka zano nderekuti: Siya simba rako rekushandisa kubasa! Ichanyatso kudzora maawa ako kuti upedze basa rako kumba.